Coachella 2018: Fringes Kwaye iziqhamo eziphezulu zenza isitayile sesitrato
Iselula! I-KCEE ihamba nge-Shirtless njengoko Etyhila i-Luxury yakhe yangaphantsi kwiLa Cueca
CI-oachella iyenzeka kwakhona kwaye silapha kwisitalato esitratweni esiza nomnyhadala wonyaka. Ngempelaveki 1 ye-2018 Coachella ebibanjelwe kuMnyhadala woMculo woBugcisa kunye nezoBugcisa eIndio, eCalifornia ngolwe-Epreli 14. Ngawo wonke umsitho, isihlwele kunye nabalandeli beza, babedanisa kwaye banxiba!
ICoachella i-2018 yayigug ngembonakalo efana ne-'s 90s-eziphefumlelweyo zesuti, isuti enemigangatho emibini kunye neminqwazi ebanzi ebomvu, iziqwenga ezilungelelanisa, ukuhombisa, iipakethi zabalandeli, iilogomania, iziqwenga ze-neon, iziqwenga zezemidlalo-eziphefumlelweyo, umphetho, iziqithi zezityalo, i-boho- isitayela se-chic, ukubukeka okuphefumlelweyo kwenkomo kunye nokunye.
Isitrato sisoloko apho indawo yenzeka khona kwaye sikuzisa ezona zitayela zibalaseleyo njengoko kubonwe kwimpelaveki yokuqala yeCoachella. Sinethemba lokubona imbonakalo yomlilo kwimpelaveki ezayo!
Jonga izitayile zesitrato saseCoachella 2018…
Ityala lekhadi: Imifanekiso ka-Getty
#Beychella 2018 Beychella Coachella coachella 2018 Isitayile sasesitalato iCoachella 2018 Coachella beyonce Umnyhadala woMculo weCoachella izitayile zeCoachella Uhlobo lwesitrato